न्युरोडमा पाँच तले स्वचालित कार पार्किङ निर्माण गर्न अध्ययन
काठमाडौँ । न्युरोडमा निर्माण गर्ने भनिएको चार सय गाडी अट्ने स्वचालित कार पार्किङका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ । व्यापारिक केन्द्र नयाँ सडक क्षेत्रको भिड तथा पार्किङको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै..
अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गमा स्थानीयको अवरोध, थप मुआब्जा माग्दै काम रोकियो
काठमाडौँ। स्थानीयवासीले मुआब्जाको कारण देखाई अवरोध गरेपछि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्गको निर्माणको काम रोकिएको छ । विसं २०४५ मा सर्भे भई २०४६ सालमा सरकारले दिएको क्षतिपूर्ति अपर्याप्त भएको, कतिपयले..
केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा करिब १०० मेगावाट विद्युत् जोडियो
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट कुल ९७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयकाअनुसार सरकारी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बेला निजी क्षेत्रका आयोजनाले भने एकपछि अर्को..
फाष्ट ट्र्याकको डिपिआर बनाउन योजना आयोगले थाल्यो काम
काठमाडौं । काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माण सरकारीस्तरमा अगाडि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन सुरु गरेको छ । सरकारले यही पुस ७ गते निर्णय गरेर काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुत मार्गलाई अगाडि..
अपर मादीको साढे १२ मेगावाट विद्युत आजदेखि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिँदै
पोखरा । कास्कीको सिल्दुजुरे–९ बाहुनडाँडामा निर्माण सम्पन्न भएको अपर मादी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको साढे १२ मेगावाट विद्युत् आजबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ । मादी खोलाबाट निकालिने कुल २५..
दोलखाका सांसद भन्छनन् :माथिल्लो तामाकोसीको शेयर मोडालिटी परिवर्तन हुँदैन
काठमाडौँ । दोलखाका सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर मोडालिटी परिवर्तन हुन नसक्ने बताएका छन् । दोलखाका सांसदहरु पशुपति चौलगार्इं, आनन्दप्रसाद पोखरेल र पार्वत गुरुङले आज संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना..
काठमाडौँ । ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गर्ने भएको छ । नेपालमा लगानी गर्न चाहने जो कोही लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने..
भारतबाट ८० मेगावाट विद्युत आयात, मुलुकभर लोडसेडिङ हट्ने
काठमाडौ‌ं । सरकारले यही पुस १७ गतेदेखि भारतबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भएको छ । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रवक्ता प्रबल..
काठमाडौं मेट्रोरेल, उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने रेलमार्गको के हुँदैछ काम?
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिले ‘जनकपुर–जयनगर’ रेलमार्ग यसै आर्थिक वर्षमा सन्चालन हुनेगरी गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको विहीबार बसेकोे बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र..
बूढीगन्डकीको मुआब्जा बाँड्न र पुनःस्थापना गर्न संयोजक पदका लागि दरखास्त आह्वान, कम्पनी ढाँचामा बनाईने
काठमाडौं । सरकारले बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनःस्थापना एकाइको संयोजक चयन गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट..
नागढुङ्गा सुरुङ निर्माणमा जापानी सहयोग सम्झौता
काठमाडौं । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई रु १५ अर्ब ४० करोड ५० लाख ऋण (१६.६३ विलियन जापानी येन) सहायता उपलब्ध गराउन जापान सहमत भएको छ । उपप्रधान मन्त्री..
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् डेढ वर्षभित्र सक्न कठिन
दोलखा। चारसय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट आगामी डेढ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ द्रुत काम भइरहेको छ । गत वर्षको भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको पहुँचमार्ग परिवर्तन गरी सुरुङ..
९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो बन्ने निश्चित, भारतिय कम्पनीले दियो प्रभावितलाई एक अर्ब मुआब्जा
सङ्खुवासभा । भारतीय लगानीकर्ता सतजल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई अहिलेसम्म रु एक अर्ब १० करोड ८८ लाख मुआब्जा वितरण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका..
​विश्व बैंकद्वारा पाँच अर्ब ९४ करोड ऋण सहयोग
काठमाडौं । विगत १८ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सडक क्षेत्र विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि थप रु पाँच अर्ब ९४ करोड सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन विश्व बैंक सहमत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा..
​४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीबाट आगामी डेढ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य
लामाबगर । चारसय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट आगामी डेढ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ दु्रतगतिमा काम भइरहेको छ । गत वर्षको भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको पहुँचमार्ग परिवर्तन गरी..
​मुस्ताङको कागबेनीमा हावाबाट एक मेगावाट बिजुली
काठमाडौँ । मुस्ताङको कागबेनीमा परीक्षणको रुपमा एक मेगावाट क्षमताको वायु ऊर्जा प्रणाली जडान हुने भएको छ । नेपालको ‘एभरेष्ट बिन इनर्जी’ प्राली र दक्षिण अफ्रिकाको ‘एभरेडी क्यास्ट्रोल इनर्जी’को सहकार्यमा वैकल्पिक ऊर्जा..
लमजुङ । लमजुङलाई ‘हाइड्रो मोडेल नमुना जिल्ला’ घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । जलविद्युत् निर्माणमा लगानीमैत्री वातावरण बनेको भन्दै हाइड्रो मोडेल जिल्ला घोषणा गर्न विशेष पहल गरिने भएको छ । पाँचाँै..
उपभोक्ता समितिका नाममा दिने पेस्कीमा रोक लगाइएपछि विकास बजेट फ्रिज
काठमाडौँ । उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिन रोक लागेपछि स्थानीयस्तरका विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०६९ ले स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका..
२० वर्षदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती पाँच वर्ष बित्दा पनि अघि बढेन
काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण २० वर्षदेखि चर्चामा छ । पाँच वर्षअघि चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी भए पनि आयोजना निर्माण अझै अन्योलमा छ । यो ७ सय ५० मेगावाटको..
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण गर्न थालेको काठमाडौँ भ्यू टावरको निर्माण कार्य अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। टावर निर्माण गर्ने विषयमा ठेकदार कम्पनी र महानगरपालिकाबीच कुरा नमिल्दा टावर निर्माण हुन नसकेको..
काठमाडौँ । बहुप्रतीक्षित थानकोट–नागढुङ्गा सडकखण्डमा प्रस्तावित सुरुङमार्ग अब निर्माण हुने पक्का भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १७ अर्ब रुपियाँ ऋण स्वीकार..
​भिर, पाखा र बगरलाई रोपनीको पाँच लाख दिदा पनि बूढीगण्डकीमा किन अवरोध ?
काठमाडौं । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा पानीको सतहले डुबाउने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले त्यसको विरोध गरेका छन् । गोरखाका प्रजिअ..
​ढल्केबर सवस्टेसनको काम १ महिनामा सकिने, थप ८० मेगावाट विद्युत् आउँदै
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित एवम् महत्वपूर्ण आयोजना मानिएको ढल्केबर सवस्टेसनको काम आगामी एक महिनाभित्र सम्पन्न हुने भएको छ । हिउँदमा बढदो विद्युत् माग पूरा गर्न सहज हुने सो सवस्टेसनको करिब ९०..
१० मेगावाटको हेवा ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना परीक्षण प्रसारणमा
पाँचथर । पाँचथरको भारपा र याङ्नाम गाविसको सिमानामा बग्ने हेवा खोलामा निर्माण गरिएको हेवाखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण प्रसारणको चरण सुरु गरेको छ । आयोजनाको जिम्मा लिएको पाँचथर पावर कम्पनीका प्रमुख..
काठमाडौं । गोरखा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य चाँडै सुरु हुने भएको छ । कुल ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गत वर्ष नै सम्पन्न..
​बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको प्रतिरोपनी पाँच लाखदेखि आठ लाख मुआब्जा निर्धारण,एक सातापछि वितरण हुने
काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पानीको सतहले डुब्ने क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । जग्गा वर्गीकरणका आधारमा न्यूनतम रु पाँच लाखदेखि अधिकतम रु आठ लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय भएको..
अँध्यारो बेचेर कमिसन खाने प्राधिकरणका पूर्व प्रमुखहरुलाई कार्वाही हुने
काठमाडौं । नेपाली जनतालाई अध्यारोमा राखेर इन्भटर, सोलार र जेनेरेटर व्यापारीसँग कमिसन खाने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक, भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख र सम्बन्धित विभागका प्रमुखलाई कारवाही हुने भएको..
काठमाडौँ । उपत्यकाको बढदो सवारी साधनको चाप थेग्न विभिन्न स्थानमा ३४.३५५ किमी सडक विस्तार गरिएको छ भने ५४.२३८ सडक विस्तारको क्रममा छ । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०६४-६५..
काठमाडौं । बहुचर्चित काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि यसअघि भारतीय कम्पनीसँग भएका सम्झौता रद्द गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास तथा अर्थ समितिको संयुक्त बैठकमा फास्ट ट्रयाक निर्माणबारे..
आगामी वर्ष बडादसैँ अघि मेलम्चीकोे पानी आउने
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि ल्याउन लागिएको मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले आज केन्द्र निर्माणस्थल सुन्दरीजलमा गरेको अनुगमनमा..
Results 1098: You are at page 11 of 37